Home » Travel Associations News » Sekretera SADC hanohanana ny RETOSA amin'ny paikady marketing fizahan-tany
Ny sekretariam-piarahamonina afrikanina atsimo atsinanana (SADC) any Gaborone, Botswana dia nanaiky ny hanohana sy hanampy betsaka ny Fizahan-tany momba ny fizahan-tany any Afrika atsimo (RETOSA) hametraka fiaraha-miasa sy loharanom-bola azo antoka avy amin'ireo mpiara-miasa iraisana eo amin'ny sehatry ny varotra fizahan-tany.
Ny mpanatanteraka avy amin'ny RETOSA dia nanao fihaonambe tamin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Sekretariatin'ny SADC tany Gaborore tamin'ny faran'ny volana Oktobra mba handinihana ireo olana izay hodinihin'ireo minisitra momba ny fizahantany avy any amin'ny faritra atsimon'i Afrika amin'ity volana ity.
Ity fifanarahana ity dia natao hamindrana ny anjara fizahan-tany an'ny faritra SADC avy amin'ny roa isan-jaton'ny mpizahatany manerantany ary ny rosia alefany ho dimy isan-jato ao anatin'ny folo taona ho avy.
Ho fanampin'izany, ny RETOSA dia niantoka ny fanohanana ireo rafitra isan-karazany horaisina amin'ny fangatahana fankatoavana avy amin'ny minisitry ny SADC amin'ny fampiharana ny dingana II amin'ny faritra iarovana ny sisin-tany (TFCA).
Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Fikambanan'ny fandraisam-bahiny sy fizahan-tany any Botsoana (HATAB) ary filoha lefitra vaovao an'ny RETOSA Lily Rakorong dia nilaza fa ny laharam-pahamehana vaovao ataon'ny Organisation dia ny fahazoana fiaraha-miasa matotra amin'ireo mpilalao sehatra tsy miankina amin'ny faritra mankany amin'ny paikady varotra kendrena ho an'ny faritra.
"Ny valin'ity fihaonana ity miaraka amin'ny Sekretariatin'ny SADC dia hampahafantatra ny fandraisan'anjaran'ny RETOSA amin'ny fanomanana ny fivorian'ny minisitry ny fizahan-tany sy ny tontolo iainana ary ny harena voajanahary SADC izay hatao any Johannesburg amin'ny 23 sy 24 Novambra amin'ity taona ity", hoy izy.
"Ny governemanta SADC dia manana andraikitra lehibe ankehitriny amin'ny fampandehanana ny Unit Coordinating Unit (TCU) ao amin'ny Secretariat an'ny Community izay fepetra lehibe takiana amin'ny famitana ny fanovana RETOSA," hoy izy nanampy.
Koa satria ny RETOSA, izay zanaky ny Sekretariatn'ny SADC, dia nanao tatitra tamin'ny talen'ny sakafo, fambolena ary harena voajanahary vaovao, zava-dehibe ny fahazoan'ny RETOSA fanazavana ihany koa momba ny fampandehanana ny Unité Coordinating Unit (TCU), hoy izy.
RETOSA dia manantena ny TCU hanampy amin'ny famahana ny tavoahangy sy ny fanamby amin'ny politikam-pizahan-tany izay manakana ny fampiasam-bola amin'ny fizahan-tany sy ny fivezivezena amin'ilay mpandraharaha.
Kenneth Racombo, tale jeneraly mpisolo toerana ao amin'ny RETOSA dia nilaza fa ny tanjona lehibe amin'ny fihaonana eo amin'ny Organisation sy ny Sekretariatin'ny SADC dia mikendry ny fanovana ao REOTSA hanombohana ny fanaovan-tsodrano ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny SADC sy ny RETOSA, araka ny takian'ireo torolàlana momba ny zanabola SADC.
Ny laharam-pahamehana vaovao dia noresahina taorian'ny fanarenana orinasa RETOSA tato ho ato izay niteraka tolo-kevitra momba ny sanda vaovao ho an'ireo mpiaramiombon'antoka lehibe aminy, ary vina vaovao izay ho tratra amin'ny alàlan'ny marketing sy ny fampiasam-bola stratejika.
Ity vina vaovao ity dia miorina mafy amin'ny fiaraha-miasa matanjaka amin'ny sehatra tsy miankina miasa ao amin'ny faritra - fihemorana mivaingana ary fiovana matotra amin'ny paradigma tamin'ny fomba fanao taloha izay nahita fahitana bebe kokoa tamin'ny governemanta na ny sehatra miankina amin'ny fanjakana.
Ny fikambanana dia manery ihany koa ny fizahan-tany intra-rezionaly ho zava-dehibe amin'ny toekarena fizahantany mivoatra ao amin'ny faritra